Ny borosy 7 tsara indrindra miteraka | Famoronana an-tserasera
Borosy 7 ambony indrindra miteraka
Iris Gamen | | borosy
Hatramin'ny nahatongavan'ny iPad teo amin'ny fiainantsika, dia nitondra rindranasa sary maro be ho an'ny fanehoana an-tsary ary ny iray amin'izy ireo no misongadina indrindra. Eny, miresaka momba ny Procreate isika, ny fampiharana ampiasain'ny mpamorona amin'ny iPad.
Nipoitra tamin'ny taona 2011 izy io ary azo vidiana amin'ny App Store, ho an'ny iOSx manokana. Tian'ny matihanina amin'ny tontolon'ny zavakanto izy io noho ny fampiharana famoronana hafa ho azy mety, ny fahaiza-manaony ary ny fahatsorany izay rehefa mampiasa azy io, ankoatry ny borosy midadasika atolotry ny Procreate antsika.
Tao anatin'ny fotoana fohy, dia nahatratra ny iray amin'ireo toerana manan-danja indrindra eo amin'ny tontolon'ny zavakanto sary, amin'ny resaka fitaovana fanoharana nomerika.
Raha mbola tsy fantatrao hoe inona ity fitaovana ity dia aza manahy, ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba izany. Ary hanoro ny borosy miteraka manolotra antsika hanao fanoharana.
1 Inona ny atao hoe Procreate?
2 Ny tsara indrindra amin'ny Procreate
2.4 animation manampy
2.7 borosy sy ara-nofo
3 Borosy 7 ambony indrindra miteraka
3.2 Gouache Set
3.5 borosy tropikaly
3.6 Curling Ribbon
3.7 fahatsiarovana shader
Inona ny atao hoe Procreate?
Izy io dia fampiharana sary nomerika matihanina. Ny asa lehibe ao ambadik'ity fampiharana ity dia ny mamorona sary na sary nomerika amin'ny fomba tsotra, noho ny fitaovana isan-karazany atolony antsika.
Natao indrindra ho an'ny matihanina avy amin'ny tontolon'ny famolavolana, manana fitaovana famoronana mora ampiasaina ho an'ny rehetra, matihanina na tsia, azonao atao ny mamorona sary mihetsika, sary na sketsa tsotra. Ny mpanakanto dia mamaritra ny fampiharana ho mitondra ny studio anao manokana eo amboninao amin'ny tranga iray.
Ny tsara indrindra amin'ny Procreate
Manaraka, hiresaka momba ny sasany amin'ireo fiasa tsara indrindra ananan'ny fampiharana isika, ary noho izany dia afaka mahazo hevitra momba ny fahaizany ho fitaovana famolavolana.
Tahaka ny ankamaroan'ny programa izay ny tanjona dia ny famolavolana na fanoharana, miasa amin'ny alàlan'ny a rafitra sosona, Miteraka koa. Ny vaovao dia azo ampiana, esorina ary atambatra amin'ny rantsantanana tsotra. Ny iray amin'ireo fahasamihafana hitanay dia ny Procreate dia afaka mametraka fetra ambony indrindra amin'ny sosona, amin'ny fiheverana ny fanitarana ny antontan-taratasy na raha avo dia avo ny famahana ny sary iasanay.
To be able jereo ny fizotran'ny asantsika, isaky ny manao kapoka vaovao eo amin'ny solaitrabe izahay, dia mitahiry izany ny Procreate, mitahiry ireo dingana ireo ary afaka mizara horonantsary mampiseho ny fizotran'ny famoronana. Ity fiasan'ny fampiharana ity dia avy amin'ny version 1.0.
Noho io fitahirizana io dia mamela ny fampiharana fafao ny dingana zato farany ary izany dia fandrosoana, noho izany dia misoroka ny manomboka amin'ny voalohany sy ny fahaverezan'ny ora fiasana.
Araka ny nanehoantsika hevitra tany am-piandohan'ny lahatsoratra, ny Procreate dia nofaritana ho hery, fahaiza-manao ary fahatsorana. ny Ny fampiharana dia mandeha lavitra noho ny karazana motera Mampiasa motera sary Valkyre izy io, manararaotra ny teknolojia ProMotion natolotry ny Apple ary manome ny fampisehoana tsara indrindra ho an'ny iPad.
Fitaovana animation izay miseho miaraka amin'ny fanavaozam-baovao Procreate 5. Afaka mahita fiasa manokana ianao, tena mora ampiasaina ary tena mahery vaika, toy ny playback eo noho eo. Amin'ity endri-javatra vaovao ity dia azonao atao mamorona sary mihetsika na GIF amin'ny antsipiriany.
Ny iray amin'ireo lafiny be resaka indrindra amin'ny app dia ny fanaraha-maso loko. Amin'ny fikasihana tokana amin'ny rantsan-tànanao na ny Apple Pencil, azonao atao ny misafidy loko rehetra ao amin'ny palette ary afaka segondra vitsy dia hanana izany eo amin'ny latabatra fiasanao ianao, izay ahafahanao manova loko tsy mila miala amin'ny lamba.
Hatramin'ny nisehoany raha miresaka momba ny Procreate isika dia manondro avy hatrany ny litera. Ao anatin'ny borosy isan-karazany, dia hitantsika ny endri-javatra StreamLine, fitaovana iray ahafahantsika manamaivana sy mampitony ny kapoka.
Raha kisendrasendra dia naka endri-tsoratra tamin'ny iOS izahay, miaraka amin'ny fitaovana an-tsoratra izay nananan'i Procreate hatry ny ela, dia afaka manafatra azy ireo any amin'ny latabatry ny asantsika isika ary ho lasa vector izy ireo ary afaka manova azy ireo araka izay tiantsika.
borosy sy ara-nofo
Ny karazana borosy atolotry ny Procreate antsika dia iray amin'ireo teboka matanjaka indrindra. Manana borosy mahazatra 200 mahery izy io, mizara amin'ny fomba samihafa, mba hanambatra ny haingon-trano ary hanome antsipiriany be dia be amin'ny fanoharana.
Tsy maninona fa efa voafaritra mialoha ny borosy, ny fampiharana dia ahafahanao manamboatra azy ireo amin'ny fanitsiana mihoatra ny 100 ary misy ambaratonga iray hafa, ary izany dia ny mamorona ny anao manokana avy amin'ny scratch, amin'ny alàlan'ny mpanamboatra texture ao anatin'ny segondra vitsy. . Raha manomboka amin'ny scratch isika dia tsy maintsy manafatra ny texture izay tiantsika ihany.
Hatramin'ny nanova ny tontolon'ny famolavolana ny Procreate dia lasa dabilio fiasana ny iPad.
Na vaovao amin'ny famolavolana sy fanoharana nomerika ianao na tsia, dia hasehonay anao ny borosy Procreate tsara indrindra eto ambany.
Tadidinao ve ilay fahatsapana maka ny loko sy manome fahafahana malalaka ny eritreritrao? Fun napetraka ny borosy izay hiverina amin'ny fahazazanao ianao hosodoko miaraka amin'ny mpiara-mianatra aminao.
Amin'ity katalaogin'ny borosy gouache tena izy ity, borosy 20 no fitambarany. Notarafina izy ireo ary maka tahaka ny gouache amin'ny taratasy fandokoana rano. Ao anatin'izany ny borosy mamelona ny gouache amin'ny fomba samihafa, manomboka amin'ny borosy manjavozavo mankany amin'ny rano kokoa.
Raha mitady famaranana organika amin'ny fanoharanao ianao, ity no kitaponao. Set feno manomboka amin'ny ranomainty ka hatramin'ny borosy rano. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mamorona boky fantasy, sary ho an'ny ankizy, toetra mahagaga, sns.
Iray amin'ireo fonosana feno indrindra ho hitanao, karazana borosy watercolor, totalin'ny 50, izay hitondrana ny Procreate default amin'ny ambaratonga hafa.
Ao amin'ity fanangonana ity dia hahita borosy ho an'ny karazana ravina samihafa ianao, izay aingam-panahy avy amin'ny tropikaly. Tena tsotra satria ny borosy no manao ny asa, mifidy ny borosy, ny loko ary mandeha.
Borosy calligraphy olioly, misy olioly tonga lafatra. Tsy azo ampiasaina raha manana Apple Pencil ianao. Ity borosy fanoratana ity dia manana fahatsapan-tsindrim-peo mazava tsara.
Ny kapoka atao dia manaraka ny dian'ny penina, ka rehefa miasa miaraka aminy dia tena zava-dehibe ny mitazona ny Apple Pencil perpendicularly.
Set borosy izay ahitanao 12 samy hafa, ny tsirairay amin'izy ireo feno karazany. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mamorona aloka, textures, tabataba, sns. izay rehetra tadiavinao amin'ny sarinao. Ny iray amin'ireo lafiny mampiavaka an'ity andian-borosy ity dia ny famitana tsara ny vokany efa tonta.
Manantena izahay fa hahazo aingam-panahy ianao hilalao amin'ity fantenana borosy mahafinaritra ity ho an'ny Procreate, ary raha fantatrao ny tokony ho ao anaty lisitra dia aza misalasala mizara azy ireo.
Procreate dia fitaovana mahery vaika noho ny katalaogin'ny borosy, noho izy ireo dia afaka manome aina ny sangan'asa ara-kanto rehetra ianao, koa mandrosoa ary midira ao amin'ny tontolon'ny fanoharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » borosy » Borosy 7 ambony indrindra miteraka
Ahoana ny fomba fanaovana sary amin'ny Procreate tsikelikely?
Nahoana no zava-dehibe ny tambajotra sosialy amin'ny Marketing Inbound?